Mirador de Selkirk, toerana miavaka Mirador de Selkirk - Nosy Robinson Crusoe
Amerika Atsimo Shily Nosy Robinson Crusoe
Toerana fitsanganana Mirador de Selkirk
Adiresy: Chile, Villeparaiso, Villeparaiso, Juan Fernandez, Robinson Crusoe Island;
Haavo: 565 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina.
Ny sehatra fiambenana Mirador de Selkirk dia miorina eo amin'ny lemaka kely iray eo anelanelan'ny tampon'ireo tendrombohitra, ao amin'ny nosy Robinson Crusoe - izay be mpitsidika indrindra avy ao amin'ny vondronosy Juan Fernandez. Ny lalana mankany aminy dia manomboka amin'ny tanànan'i San Juan Bautista ary mandeha any an-tendrombohitra, ho any amin'ny 565 metatra. Ilaina ny mitaingina làlana ety, mihodina any amin'ny kirihitrala matevina eo an-tampon'ny tendrombohitra, mandritra ny adiny roa. Saingy ny fahitana mahatalanjona ny faritra manodidina sy ny ranomasimbe miala amin'ny kilometatra am-polony dia manonitra ity tsy fahampiana kely ity.
The Legend of Robinson
Ny prototype ilay maherifonan'ilay tantara malaza momba ny tantaram-pitiavana niaingany tany amin'ny nosy tsy nisy mponina dia lehilahy tena izy - ilay tantsambo Scottish Alexander Selkirk. Ny zatovolahy nikorontan-tsaina taorian'ilay fanafintohinana niaraka tamin'ny kapiteny dia nitaky ny hametraka azy tany amin'ny nosy voalohany teny an-dalana. Nitranga izany tranga izany, saingy tsy niorina sy nialana tamin'ireo lalan'ny ranomasina ny nosy. Tsy maintsy nandany nandritra ny 4 taona i Selkirk alohan'ny noraisin'ny sambo britanika iray. Ity nosy ity dia nantsoina tamin'ny anaran'ny maoderina maoderina - Robinson Crusoe, saingy ny nosy manodidina dia mitondra ny anaran'ilay tantsambo, Alexander Selkirk. Ny sehatry ny fiambenana miradoran'i Mirador de Selkirk dia miorina eo amin'ny toerana izay nipetrahan'ny tantsambo tsirairay amin'ny fanantenana hahita ireo sambo mandeha lavitra ny nosy ary misarika ny saina ho amin'ny tenany.
Mirador de Selkirk - famantarana ny nosy
Ny takelaka fahatsiarovana, izay mirakitra ny fanazavana momba ny fotoana niainan'i Alexander Selkirk tao amin'ny nosy ary ny zava-misy maromaro avy amin'ny tantaram-piainan'ny nosy tsy atahorana, dia miafina amin'ny ampangotrahin'ny kirihitra maina. Ampitao ny endriky ny gazy kanto, labozia maromaro ary sarivongan'i Madonna, izay tsy dia mahazatra loatra amin'ny toerana lao. Avy ao amin'ilay tranokala no ahitanao ny Bay Cumberland, ny tanànan'i San Juan Bautista ary saika ny faritra atsinanan'ny nosy. Azonao atao ny manofa trano kely iray ary mandany andro vitsivitsy mifanaraka sy mangina, mankafy ny fomba fijery mahafinaritra momba ny natiora tropikaly. Ny hatsaran-tarehy sy ny fahatoniana ireo toerana ireo dia manome vahana ny divay sira Shiliana, izay miavaka amin'ny fomba tokana - tsy miompy ao amin'ny tanibe, fa eto ao amin'ny nosy Robinson!
Voarakitra matetika ao amin'ny vondronosy Juan Fernandez ao Santiago, ary tokony ho eo amin'ny 2.5 ora eo ho eo. Amin'ity indray mitoraka ity dia ilaina ny mampiditra fiarandalamby avy ao amin'ny seranam-piaramanidina mankany an-tanàna. Ny fitsangantsanganana an-dranomasina avy any Valparaiso dia malaza be, satria mitaky roa andro, miankina amin'ny toetrandro.
National Botanical Gardens ao Chili
Area of ​​Eleuterio Ramirez
Inona no tokony homeko ny zanako rehefa ariana?
Salady miaraka amin'ny prunes
Ahoana no hanesorana ny fanimbana ny tenanao?
Ringy amin'ny safira sy diamondra
Ahoana no hanamboarana carp in the oven?
10 ny ankamaroan'ny modely tsy miankina amin'ny orinasa mpaka sary
Trends amin'ny 2017 amin'ny akanjo - ny fanavaozana farany sy ny lamaody farany
Tea miaraka amin'ny bergamot - tsara sy ratsy
Fanamboarana varavarana amin'ny tanana manokana
Ahoana ny fomba handraisanao ny fampiasana traikefa an-tariby mba tsy hananana lanja?
Ahoana ny ifandraisana amin'ny monopod?
25 zava-misy mahatsiravina momba ny fahadiovan'ny lasa
Ahoana no hananana sarintany sarobidy?
Niseho tao amin'ny saribakolin'ny Papio i Kylie Jenner
Ahoana no hanamaivana ny fahaketrahana?
Corkscrew ho an'ny divay
Sakafo avy amin'ny chlamie